यसकारण नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली
ठाकुर प्रसाद पोखरेल माघ १८ । विविधतामा आधारित हाम्रो देश नेपाल धेरै प्राकृतिक साधन स्रोतले भरिभराऊ भएर पनि हामी विश्व मानचित्रमा अविकसित देशका हुतिहारा जनता हुन विवश पारिएका छौं । नेपालले राणा शासनबाट छुट्कारा पाएसंगसङ्गै स्वतन्त्र भएको देश दक्षिण कोरियाले सम्वृद्द देशको ईतिहास बनाई सक्यो । भारत शक्ति र सम्पन्नतामा हामीभन्दा सयौं गुना अगाडि छ । अमेरिका ,चीन, सिंगापुर...
विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप भइरहँदा पनि प्राज्ञिक क्षेत्र किन मौनरु
केदारभक्त माथेमा पढ्ने, पढाउने, लेख्ने, साहित्य रचना गर्ने यो समूहमाझ आफूलाई पाउँदा बढो खुशी लागेको छ। यही समूहमाझ केही कुरा बोल्नुपर्दा भने छाती ढक्क फुलेर पनि आएको छ। के कुरा गर्ने होला, कुरा कसरी सुरु गर्ने होला।।।। उमेरले गर्दा होला, मनमा धेरै कुरा खेल्छ। रिस पनि उठ्छ। कहिले त दिनभरि नै रिस उठिरहन्छ। देशले अहिले पनि गति लिन नसकेको देख्दा, एकपछि अर्को राजनीतिक झगडामा...
जेफ्री डी. स्याक्स सन् १७७६ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘वेल्थ अफ नेशन्स’ मा बेलायती अर्थशास्त्री एडम स्मिथले भूमण्डलीकरणका महत्वपूर्ण प्रारम्भिक घटनाबारे वर्णन गरेका छन्। क्रिस्टोफर कोलम्बसले सन् १४९२ मा युरोपबाट अमेरिका पुग्न पत्ता लगाएको समुद्री मार्ग र भास्को डी गामाले सन् १४९२ मा भारततर्फ गरेको समुद्री यात्राले आधुनिक भूमण्डलीकरणको नक्सा कोरेका...
संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चित गरौं प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली
काठमाडौँ , माघ १० । यसै न उसै अहिले संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा दलहरु विभाजित छन् । संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन पारित गराउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, सरकार र सत्तापक्ष जोडतोडले लागिरहेका छन् । मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले लगायतका साना दल भने संशोधन प्रश्तावको विपक्षमा छन् । तर आम जनताको नजरबाट हेर्ने हो भने संविधान संशोधनको खाँचो अति नै छ, तर अहिले सत्तापक्ष...
डा. गणेशराम न्हेमाफुकी गत वर्षको भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यकामा भक्तपुर, बुङ्मती, साँखु, गोंगबु, सितापाइलाका साथै उपत्यकाबाहिर केही ठाउँमा धेरै प्रभाव परेको छ। प्रभावित दुई किसिमका घरको यहाँ चर्चा गर्नु उपयोगी देखिन्छ, परम्परागत रूपमा बनाइने माटोको जोडाइमा इँटाले बनाएका घर र आधुनिक तथा तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिने कंक्रिटका घर। भूकम्पमा माटोको जोडाइमा इँटाले बनाएका...
निरन्तर पैसा सापट दिने हैसियत भएको मान्छेलाई हामीकहाँ ‘तिमी त मेरो बैंक हौ नि’ भन्ने चलन छ। यो हाम्रो समाजले बैंकप्रति देखाएको विश्वास हो। बैंकमा कहिल्यै पैसा अभाव हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचाइको उपज हो। सोच्नुहोस् त, त्यही बैंक जहाँ पायो त्यही पैसा छर्दै हिँड्न थाले के स्थिति होलारु तपाईं–हामीलाई जीविकाको निम्ति उत्पादन कार्यका लागि ऋण चाहिए कसले देलारु नेपालको...
लम्पसारवाद’ का विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ
खेम थपलिया कमान्डर कमरेडहरूको तथ्याङ्कअनुसार जनयुद्धमा लडिएका युद्धहरूमा ८५ प्रतिशत युद्धहरू माओवादीले जितेको थियो । १५ प्रतिशत युद्धहरू मात्र असफल भएका थिए । युद्धमा भएको हताहति हेर्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई छोड्ने हो भने जनमुक्ति सेनातर्फ निकै कम क्षति पुगेको छ । ८० प्रतिशत भू–भाग माओवादी सत्ताको नियन्त्रणमा थियो । जनयुद्धकालमा माओवादी सैन्यमोर्चामा ८५...
जलस्रोत , जलविद्युत परियोजना र पीडित माथिल्लो कर्णाली
हेम चन्द्र राई - नेपाल जलस्रोतम बिस्वमा सबैभन्दा धनी ब्राजिल पछिको दोस्रो ठुलो मुलुक हो । नेपालमा जलस्रोतको प्रमुख स्रोत हिमालय बाट बग्ने नदिहरु स्रोत हुन । नेपालमा भएको नदिहरु बाट ८४ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको विभिन्न अध्यनबाट पुष्ठि भएको छ । बिडम्बना नेपालमा अहिले बर्षातमा ७०३ मेगावाट र हिउँदमा ३९३ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन...